Icho chienzanidzo chiitiko chekambani chero ipi zvayo, saka ngatifambei nemapeji ekuremerwa uye nekwaungave kwakavharirwa nzira.
Dhatabhesi Kugadzirisa - Mune yemazuva ano zvemukati manejimendi manejimendi, zvakakosha kuti dhatabhesi rako riwedzerwe kuwedzera nguva inotora kumubvunzo uye kupindura nedata pakushanya kusingawanikwe. Iyo zvakare tsika yakanaka kubata dhatabhesi pane rakasiyana server kubva kune yako webhu server asi munzvimbo imwecheteyo.
Peji Elements - Mabhurawuza anowanzoita zvikumbiro kudzokera kune imwechete sevha imwe panguva. Kana paine akawanda maseru kana subdomains, zvinhu zvinogona kukumbirwa panguva imwe chete. Mamwe makambani anotumira akawanda subdomains ezvinyorwa, machira emashita, uye midhiya kuti ashandise nzira mabhurawuza anoita izvo zvikumbiro. Kana iwe uri kurodha akawanda magwaro kana masitayera, kuasanganisa iwo kuve mashoma mashoma mafaera kunovandudza mashandiro futi.
Mobile Kugadzirisa -Kupindura dhizaini kuri, nenzira kwayo, kwese kutsamwa izvozvi kuti upe zvinowirirana zviitiko zvevashandisi zvisinei nechitarisiko chechigadzirwa chako. Asi zvakare zvinogona kunge zvichidzora pasi yako yekuona nhare - uko kuri kuwedzera muzana yevashanyi vari kusvika.
Heano achangobva kuburitswa infographic kubva Instart Logic pamawebhusaiti zvave sei fatter, uye kukanganisa.
Ndinobvumirana nezvose gumi nezviviri zvakataurwa.
Zvekukura webhusaiti traffic, ini ndinokurudzira kubva kune kwakagovaniswa kuitisa kune iyo VPS kana yeWordPress kubata, nepo uchitevera kune izvo zvakanyorwa pamusoro.